मृ’त्यु भएकाहरुको छोरी ब’न्दै १८ वर्षीया सपना रोका मगर वे’वारिसे अवस्थामा भेटि’एका मृ’त शरीर – लाई दि’न्छिन् दाग’ब’त्ती – AB Sansar
मृ’त्यु भएकाहरुको छोरी ब’न्दै १८ वर्षीया सपना रोका मगर वे’वारिसे अवस्थामा भेटि’एका मृ’त शरीर – लाई दि’न्छिन् दाग’ब’त्ती
September 26, 2020 September 26, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on मृ’त्यु भएकाहरुको छोरी ब’न्दै १८ वर्षीया सपना रोका मगर वे’वारिसे अवस्थामा भेटि’एका मृ’त शरीर – लाई दि’न्छिन् दाग’ब’त्ती
काठमाडौँ – परा पूर्व’कालदेखि नै मृ’त शरीरलाई छोराले मात्रै दागबत्ती दिँदै आएको हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय छोरीले पनि दा’गबत्ती दिने गरेको र छो’रासरह क्रियापुत्री बस्ने गरेको उदाहरणहरु आइरहेका छन्।म्याग्दीकी १८ वर्षीया स’पना रोका म’गर पनि मृ\_त शरी’रलाई दाग’बत्ती दिन्छिन्।
उनको अवस्था भने अरुको भन्दा फरक छ। वे’वारिसे अवस्थामा भेटि’एका श-वहरुलाई दा’गबत्ती दिएर अ’न्ति’म सं’स्कार गर्छिन् सपना। परिचय नै नभएका वे’वारिसे श-वको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा उनलाई सन्तुष्टि मिल्छ। उ’नले हालसम्म ४५ वटाभन्दा बढी वेवारिसे श-वको व्यवस्थापन गरिसकेकी छन्।
सायद, परिस्थिति अनुकूल हुन्थ्यो त उनी यतिबेला आफ्नै संसारमा रमा’इरहेकी हुन्थिन्। तर को’रोना भा’इरसको म’हा मारीले गर्दा उनको काम अहिलेका लागि रोकिएको छ।खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने भएपनि सम्पन्न नै थियो सपनाको परिवार। दाइ पहिले देखि नै विदेशमा र दिदीको पनि बिहे भइसकेकोले गर्दा घरकी कान्छी छोरी सपना पुल्पुलिएकी थिइन्।
उनले भनेका हरेक कुरा आमाबुवाले पुर्‍याइदिन्थे।पढाइमा अब्बल सपनाले २०७३ सालमा म्याग्दीकै महेन्द्ररत्न उच्च माध्यामिक विद्यालयबाट एसईई दिइन्। त्यसपछि आफ्ना अनगिन्ती लक्ष्य र बाबुआमाको सपना बोकेर गाउँ छाडेर सदरमुकाम बेनीमा आएर कक्षा ११ मा भर्ना भइन्।घर छाडेपछि उन’को दैनिकी र साथी संगत दुबै फेरियो।
जोकोहीसँग पनि एकदमै छिटो घुलमिल हुन सक्ने र अरुको दु’ख देख्न नसक्ने उनकाे बानी थियो।साथीहरुले दुःखसुख पोख्थे, उ’नले सकेको सहयोग गर्थिन्। तीनै साथीह’रुको संगतले उनले बाटो बिराइन्।
पत्याउनु हुन्नहोला ! काठमाडौ उपत्यकामै पाइन्छ यति सस्तो जग्गा !
साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर !हेर्नुहोस
२० वर्षीको कलिलो उमेरमै अस्ताए राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी , देशले एक होनहार खेलाडी गुमायो !!